मुसामा सफल परीक्षण, छिट्टै मानिसमा गरिने – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/मुसामा सफल परीक्षण, छिट्टै मानिसमा गरिने
काठमाडौं, चैत्त २२ गते । पिट्सवर्ग विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र शिक्षण अस्पतालले कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपको जनावरमा सफल परीक्षण गरेको छ । मुसामा गरिएको परीक्षणमा खोपले सार्स–कोभ–२ नाम दिइएको नोभेल कोरोनाभाइरस विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता उत्पादन गरेको देखिएको छ ।
उक्त शोधका लेखक डा. आन्द्रे गम्बोटोले सामान प्रकृतिका भाइरस विरुद्धको खोप विकसित गर्न पहिलेदेखि नै जुटेको कारण विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकत्र्ताले यति छिटो परिणाम दिएको बताउनुहुन्छ ।
“हामी समक्ष २००३ मा सार्स–कोभ र सन् २०१४ मा मर्स–कोभको अनुभव थियो, यी दुबै भाइरस सार्स–कोभ–२ को नजिकका हुन् ।” स्पाइक प्रोटिनले कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्प्रेरण गर्ने डा. गम्बोटो बताउनुहुन्छ ।
पिट्सवर्ग विश्वविद्यालयका छाला विज्ञान विभागका अध्यक्ष डा. लुइस फालोले विभिन्न विधामा अनुसन्धान गरिरहेका वैज्ञानिहरुले साझा लक्ष्य लिएर काम गर्दा उक्त परिणाम आएको बताउनुभयो ।